Best Zilliqa mgbanwe
Best Zilliqa ọnụego mgbanwe ọnụego taa site na netwọk ego ego. Ebe kachasị mma ịzụta ma ọ bụ ire Zilliqa taa.
Best Buy price Zilliqa $ 0.011629 ZIL/BTC GOPAX
Ahịa ahia kacha mma Zilliqa $ 0.012982 ZIL/ETH MXC
A na-ahụrịrị ọkwa kacha mma Zilliqa na usoro ego ego abụọ na-agbanwerịta mgbanwe. Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere Zilliqa na onye na-agbanyere ego crypto ọ bụla dị iche. Ọ dị mfe ịghọta na Zilliqa ọnụego mgbanwe ego ego n'otu n'otu na-ahaziri ọnye mgbanwe crypto ọ bụla. Nke a Best Zilliqa mgbanwe peeji na-enyocha ọnụọgụ nke azụmahịa na nyiwe ahịa ego ego niile ma gosipụta ọnụahịa kacha mma na azụmaahịa Zilliqa ugbu a.
Best Zilliqa obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta Zilliqa na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma Zilliqa na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ kachasị mma Zilliqa bụ ezigbo echiche dịịrị onye nwe ego ego ọ bụla. Mpempe akwụkwọ Crypto - ebe ịchekwa ego crypto. Ejiri obere akpa iji nyefee ego ego n'etiti ndị dị iche iche. Mpempe ego crypto nwere parampat dị mkpa: ịdị mfe nchekwa, ntụkwasị obi. A na-agbakọ azụmaahịa kacha mma ego ego Zilliqa na nkeji oge ọ bụla n'ihi nyocha nke azụmaahịa azụmaahịa zuru oke banyere ire na ịzụta nke ego ego.
Ụlọ ahịa Zilliqa kacha mma
Zilliqa ọnụego kachasị mma na 28/05/2020 egosiputara na tebụl nke ọnụahịa azụmaahịa niile maka mgbanwe taa. Ọnụ ego kachasị mma maka ịzụrụ, ire ego ego Zilliqa na 28/05/2020 taa anyị gosipụtara tebụl ndị dị n'elu maka ịdị mfe nghọta. Ihe ngbasa ozi nke Zilliqa Kasị mma ọnụego mgbanwe taa 28/05/2020 na-enyocha gị ọnụego ego ego kachasị mma site na ezigbo ezigbo ihe niile dị na ntanetị. Kacha mma Zilliqa ọnụego ịzụrụ ihe dị n'elu peeji ahụ. A na-egosipụta ọnụego azụmaahịa na dollar.
BTC ETH USDT KRW USD BUSD XRP EUR IDR BCH TRY BNB THB Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa Zilliqa nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
Binance ZIL/BTC $ 0.012124 $ 7 326 477 -
Binance ZIL/USDT $ 0.012091 $ 6 318 282 -
Binance ZIL/ETH $ 0.012109 $ 825 731 -
Binance ZIL/BNB $ 0.012098 $ 353 411 -
Binance ZIL/BUSD $ 0.012052 $ 98 792 -
CoinEx ZIL/USDT $ 0.012146 $ 548 872 -
CoinEx ZIL/BTC $ 0.012136 $ 514 935 -
CoinEx ZIL/ETH $ 0.012198 $ 254 297 -
CoinEx ZIL/BCH $ 0.01224 $ 126 644 -
Sistemkoin ZIL/BTC $ 0.012108 $ 348 910 -
Sistemkoin ZIL/USDT $ 0.012104 $ 134 630 -
Sistemkoin ZIL/TRY $ 0.012104 $ 126 103 -
Sistemkoin ZIL/ETH $ 0.012072 $ 55 933 -
ProBit Exchange ZIL/USDT $ 0.01295 $ 49 370 -
ProBit Exchange ZIL/BTC $ 0.012931 $ 39 014 -
ProBit Exchange ZIL/KRW $ 0.012716 $ 34 215 -
Huobi Korea ZIL/USDT $ 0.012954 $ 16 492 -
Huobi Korea ZIL/ETH $ 0.012954 - -
Huobi Korea ZIL/BTC $ 0.012936 - -
LocalTrade ZIL/USDT $ 0.012084 $ 986 071 -
LocalTrade ZIL/ETH $ 0.012119 $ 142 212 -
LocalTrade ZIL/BTC $ 0.012018 $ 35 768 -
Bitrue ZIL/BTC $ 0.012867 $ 1 298 346 -
Bitrue ZIL/ETH $ 0.012906 $ 81 107 -
Bitrue ZIL/XRP $ 0.01279 $ 34 440 -
Exrates ZIL/USD $ 0.01221 $ 1 449 105 -
Exrates ZIL/BTC $ 0.012216 $ 751 167 -
Exrates ZIL/ETH $ 0.012252 $ 451 866 -
Hubi ZIL/USDT $ 0.012215 $ 82 227 -
Hubi ZIL/BTC $ 0.012185 $ 16 647 -
Hubi ZIL/ETH $ 0.012265 $ 7 343 -
Alterdice ZIL/BTC $ 0.011895 $ 196 208 -
Alterdice ZIL/USD $ 0.01193 $ 149 753 -
Alterdice ZIL/ETH $ 0.012027 $ 7 180 -
AAX ZIL/USDT $ 0.011663 $ 92 851 -
AAX ZIL/BTC $ 0.011671 $ 74 526 -
AAX ZIL/ETH $ 0.011675 $ 49 250 -
Dex-Trade ZIL/BTC $ 0.012244 $ 1 183 301 -
Dex-Trade ZIL/USDT $ 0.012217 $ 671 736 -
Dex-Trade ZIL/ETH $ 0.012237 $ 171 993 -
BitUBU ZIL/BTC $ 0.011971 $ 10 -
BitUBU ZIL/USDT $ 0.012096 $ 5 -
BitUBU ZIL/ETH $ 0.012137 $ 3 -
OKEx Korea ZIL/BTC $ 0.01179 - -
OKEx Korea ZIL/ETH $ 0.011841 - -
OKEx Korea ZIL/USDT $ 0.011785 - -
Huobi Global ZIL/USDT $ 0.012601 $ 2 279 977 -
Huobi Global ZIL/BTC $ 0.012555 $ 631 957 -
Huobi Global ZIL/ETH $ 0.012639 $ 128 606 -
OKEx ZIL/USDT $ 0.01276 $ 9 495 906 -
OKEx ZIL/ETH $ 0.012798 $ 30 747 -
OKEx ZIL/BTC $ 0.012673 $ 17 123 -
GOPAX ZIL/KRW $ 0.012728 $ 5 391 -
GOPAX ZIL/ETH $ 0.012064 $ 0.024676 -
GOPAX ZIL/BTC $ 0.011629 $ 0.011629 -
Gate.io ZIL/USDT $ 0.012729 $ 118 741 -
Gate.io ZIL/ETH $ 0.012241 $ 3 932 -
CoinField ZIL/XRP $ 0.012851 $ 138 997 -
CoinField ZIL/USDT $ 0.012811 $ 108 637 -
MXC ZIL/USDT $ 0.012944 $ 655 887 -
MXC ZIL/ETH $ 0.012982 $ 248 082 -
BitMax ZIL/USDT $ 0.012134 $ 667 569 -
BitMax ZIL/BTC $ 0.012123 $ 472 532 -
BKEX ZIL/ETH $ 0.012946 $ 2 415 963 -
BKEX ZIL/USDT $ 0.012939 $ 1 067 188 -
Cat.Ex ZIL/BTC $ 0.012026 $ 876 523 -
Cat.Ex ZIL/ETH $ 0.012059 $ 609 901 -
Hotbit ZIL/BTC $ 0.01284 $ 98 939 -
Hotbit ZIL/ETH $ 0.012982 $ 47 616 -
KuCoin ZIL/BTC $ 0.012662 $ 245 346 -
KuCoin ZIL/ETH $ 0.012707 $ 23 153 -
HitBTC ZIL/USDT $ 0.012335 $ 629 355 -
HitBTC ZIL/BTC $ 0.012212 $ 404 109 -
FEX ZIL/ETH $ 0.012256 $ 60 361 -
FEX ZIL/USDT $ 0.01222 $ 52 255 -
DigiFinex ZIL/USDT $ 0.012466 $ 1 962 457 -
DigiFinex ZIL/ETH $ 0.012581 $ 107 907 -
Huobi Russia ZIL/BTC $ 0.012202 - -
Huobi Russia ZIL/USDT $ 0.012228 - -
Binance.US ZIL/USD $ 0.0128 $ 546 600 -
Binance.US ZIL/BUSD $ 0.012898 $ 46 072 -
Lukki Exchange ZIL/BTC $ 0.012034 $ 29 044 -
Lukki Exchange ZIL/ETH $ 0.012046 $ 8 774 -
WazirX ZIL/USDT $ 0.012178 $ 40 593 -
WazirX ZIL/BTC $ 0.0121 $ 7 824 -
CoinDCX ZIL/BTC $ 0.012229 $ 189 904 -
CoinDCX ZIL/USDT $ 0.012296 $ 19 504 -
BiKi ZIL/ETH $ 0.012914 $ 16 324 -
Bitfinex ZIL/USD $ 0.012083 $ 14 652 -
BITStorage ZIL/ETH $ 0.01226 $ 2 847 -
Upbit ZIL/KRW $ 0.011864 $ 409 959 -
Bitvavo ZIL/EUR $ 0.012664 $ 213 340 -
Bitkub ZIL/THB $ 0.012555 $ 83 653 -
Bione ZIL/USDT $ 0.012198 $ 632 897 -
Bittrex ZIL/BTC $ 0.012656 $ 74 187 -
Tokocrypto ZIL/IDR $ 0.012505 $ 20 703 -
Coinall ZIL/BTC $ 0.012057 $ 67 -
Lykke Exchange ZIL/ETH $ 0.012434 - -
Bithumb ZIL/KRW $ 0.012373 $ 955 865 -
Korbit ZIL/KRW $ 0.01243 $ 49 674 -
Binance JEX ZIL/USDT $ 0.012159 $ 2 130 011 -
Coinone ZIL/KRW $ 0.012543 $ 36 172 -
DragonEX ZIL/USDT $ 0.011972 $ 20 580 -
VCC Exchange ZIL/BTC $ 0.012319 $ 125 100 -
A na-edobe ọnụego ịzụta kacha mma Zilliqa mgbe ịzụrụ ego na-abụghị ọkọlọtọ ma ọ bụ ego ego ndị ọzọ. Anyị na-egosikwa ụdị ego a ga-eji zụta Zilliqa. Ọnụahịa kachasị mma nke Zilliqa maka taa - anyị na-egosi na elu peeji nke ọrụ a. A na-egosi dollar Zilliqa na dollar. A na-etoliteghị ọnụahịa kachasị mma Zilliqa mgbe ana erere dollar. Maka ego ọzọ ma ọ bụ ego ego, ọnụahịa ere nwere ike ịba uru karịa.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego Zilliqa mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire Zilliqa edepụtara na tebụl dị na peeji a. A na-ahazi ngosipụta mgbanwe site na ọnụego mgbanwe kacha mma maka ire na ịzụ Zilliqa. Egosipụtara ọnụego a na dọla US. Nwere ike iji nzacha nke ego dị iche iche. Ọ dị n'elu tebụl nke mgbanwe crypto kacha mma.